Merry Christmas & Ha... | Your Property Finder Company Ltd.
Exhibition By YPF 13,December 2019
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သော Emerald Bay Condominium Launching Event တွင် ရရှိခဲ့သော အထူး Promotion များအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ ရှိ YPF ၏ VIP Customer များအတွက် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
-5Years Installment without Interest!!!
- Free Maintenance Fees For2Years!!!
- Cashback $900 Discount!!!
- Event Discounts!!!
- Lucky Draw for Buyers!!!
Please TAKE NOTE: All these promotions are only in 21 December 2019 (SATURDAY)
Time within 1 to6pm
ဘာကြောင့် Emerald Bay မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ သင့်တာလဲ???
👉 ထပ်မရနိုင်တော့မဲ့ မြစ်ကမ်းနံဘေး ရှုခင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ ၏ ပထမဦးဆုံး ရွက်လှေဆိပ်ကမ်း (Marina Yacht Club) ပါဝင်ခြင်း
👉5star အဆင့်ရှိ အိမ်ရာ ၀န်ဆောင်မှူ ကို အိမ်ရာပေါင်း ၃၀၀၀၀၀၀ မှ အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိထားတဲ့ Country Garden ရဲ့ property management service
👉 အိမ်ရာ အတွင်းဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ကို နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြင့် အဆင့် ၇ ဆင့်ပါဝင်သော လုံခြုံရေးနည်းပညာများ အသုံးပြုထားမှု Smart Intelligent Safety
ဒီ (၃)ချက် လုံးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ့် Emerald Bay Project ကြီးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ...
Emerald Bay Project ကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့ ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ တည်ရှိလာတော့မည့် Project ကြီးဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်မြို့ ကဲ့သို့လှပသော မြစ်အလှရှုခင်းကို မိမိအခန်းမှ တ၀ကြီးကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် အလွန်ရှားပါးသော မြစ်ကမ်းဘေးအလှကို ရရှိမည့် Project ကြီးဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားသည့် လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး (သို့ ) အောက်ပါ Register form တွင် Registerပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီး အထက်ပါ invitation card ကို ပြသပြီး လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
+𝟔𝟓 𝟗𝟑𝟐𝟓𝟒𝟕𝟕𝟖/ +𝟔𝟓𝟖𝟓𝟖𝟔𝟔𝟕𝟒𝟑
𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫 (+𝟗𝟓)𝟗 𝟕𝟕 𝟎𝟕𝟒𝟖𝟓𝟖𝟑 / (+𝟗𝟓)𝟗 𝟕𝟖 𝟗𝟗𝟐𝟔𝟐𝟖𝟎/ (+𝟗𝟓)𝟗 𝟕𝟕 𝟒𝟒𝟒𝟗𝟒𝟐𝟗
LT2206007222 : Land Only For Sale in Bahan
LT2206007221: Land for Sale in Mayangone
LT2206007220: Landed House for Rent in Mayangone
LT2206007219: 2BR brand new unit for Sale in Kanbae Tower
LT2206007218: Office space for rent in Kamaryut.
LT2206007217:3bedrooms unit for Rent in Bahan